अभियोग स्वीकार गराउन पाइपले कुट्यो, मुख र नाकमा पानी हाल्यो ! – Everest Dainik – News from Nepal
अभियोग स्वीकार गराउन पाइपले कुट्यो, मुख र नाकमा पानी हाल्यो !
सप्तरी, कार्तिक १० । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई जबरजस्ती हत्या अभियोग स्वीकार गराउन चरम यातना दिएको अर्को घटना बाहिर आएको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नुका साथै निर्देषलाई यातना दिएको घटनामा प्रहरी आलोचित भइरहेको छ ।
सप्तरीमा पनि हत्याको एउटा घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा युवकलाई पक्राउ गरेको कुटेको पीडित परिवारको दाबी छ । रिहा भए लगतै युवकलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । राजविराजमा-१ कात्तिकमा मारिएकी आशा देवको हत्या गरेको कबुल गराउन प्रहरीले राजविराज ६ का युवक बिक्की मेहतरलाई निर्घात कुटपिट गरेको परिवारको दाबी छ ।
अनुसन्धान गर्न भन्दै २५ वर्षीय मेहतरलाई गत बिहीबार साँझ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । बयानका क्रममा आफू नगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारी भएको र हत्यामा संलग्न नभएको बताएपनि प्रहरीले कुटपिट गरेर स्वीकार गर्न बाध्य पारेको बिक्कीले बताएका छन् ।
‘सुरुमा आशालाई तिमीले नै मारेको होइन ? भन्दै सई मोती रामले प्रश्न गरे’ बिक्की भन्छन्, ‘मैले अस्वीकार गर्दा पनि पटक-पटक यही प्रश्न सोधियो र प्लाष्टिकको पाइपबाट हिर्काए ।’ ‘त्यसपछि हात र खुट्टा बाँधपाँच मिनेटसम्म मुखमा पानी हालिराखे’ उनले भने, ‘सास नै रोकिएपछि बल्ल छाडे ।’ अहिले उनको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अनलाइनखबरबाट साभार
ट्याग्स: Bikki Mehattar, saptari